Nnageenyaafi tasgabbii Gamtaa Afrikaafi tattaaffiileesaa
Dhaabbanni Tokkummaa Afrikaa duraanii sirna kolonii cabsuun hiree Afrikaanotaa murteessuuf ALA bara 1963 biyya keenyatti hundeeffame. Bifuma kanaan sochii cimaa taasiseen biyyootni Afrikaa marti gamtaadhaan bilisummaasaanii gonfachuu keessatti tumsa olaanaa taasiseera.
Moggaasni dhaabbatichaa ALA bara 2001 eddii gara Gamtaa Afrikaatti jijjiiramee as nageenyaafi misooma Afrikaa mirkaneessuu keessatti tattaaffii cimaa taasisaa jira.
Keessumaa tasgabbiifi nageenya Somaaliyaa akkasumas waldhabbii biyyoota naannawa haroowwan Chaad jiraatan gidduutti uumamaa ture furuuf sochii taasisaa turetti daran milkaa’eera. Gama biraatiinis hojii manaa guddaan ammayyuu gamticharraa haalaan kan eegamu ta’uunis kan dagatamu miti.
Torban darbe Kaawunsiliin Nageenyaafi Tasgabbii Gamtaa Afrikaafi Dhaabbata Mootummoota Walta'anii yaa’ii idileesaa 11fa wayita Finfinneetti adeemsisetti raawwii gaariifi dadhabbii gamtichaa ilaalchisee yaadonni hedduun ka’aniiru. Dura teessuun Kaawunsilii Nageenyaafi Tasgabbii Gamtaa Afrikaa, Ambaasaaddar P.J Mooleef akka jedhanitti, Somaaliyaatti eegdota nagaa erguun alatti filannoo dimokraatawaan karaa nagaatiin akka geggeeffamu gochuun biyya rakkoo nageenya hamaa keessa turte tasgabbeessuun danda’ameera. Haaluma walfakkaatuun rakkoo nageenyaa naannawa haroo Chaaditti Bookoo Haaraamiin uumamaa ture furuuf tattaaffii taasifameen nageenya naannawichaa mirkaneessuun danda’ameera.
Injifannoon hanga ammaatti argame wareegama lubbuus of keessaa qaba. Kana hunda garuu kutannoon keessa ba’uun ummata aduun nageenyaa jalaa dhiyeef nagaa buusuun akka danda’ame ambaasaadarittiin ni dubbatu.
Sudaan Kibbaatti tasgabbii mirkaneessuuf tattaaffii taasifameen fooyyeen jiraatus rakkoon nageenya biyyattii ammayyuu dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaadu ta’uu yaadachiisaniiru. Dubartootaafi daa’imman gudeeduun, dhiittaan mirga namummaa, beelaafi godaansi rakkoolee hamoo gara fuulduraatti xiyyeefatamuu qaban ta’uu daaw'annaa biyyattiitti taasisaniin hubachiisaaniis ibsaniiru.
Gamtaa Afrikaatti Bakka bu’aan Dhaabbata Mootummoota Walta'anii Obbo Hayilee Manqooriyoos akka dubbatanitti, mankaraaressummaan, shororkeessummaan, hongeefi rakkoo nageenyaa dhimmoota bara darbe bal’inaan irratti hojjetamaa tureedha.
Somaaliyaan tasgabbooftee mootummaa ofii hundeeffattus gochi shororkaa Al-Shabaabiin raawwatamuufi biyya waraanaan bututte deebisanii bayyanachiisuu ammayyuu dhimmoota furmaata hatattamaa barbaadaniidha.
Haaluma walfakkaatuun humna garee shororkaa Bookoo Haaraam cabsuufi dadhabsiisuun danda’amus gochi shororkaa garee kanaa biyyoota Afrikaa Kaabaatiif akkuma yaaddoo ta’etti aaka jiruudha kan ibsame.
Gama biraatiin waldhabbii Pirezidaanti Saalvaa Kiiriifi ittaanaasaanii Ri’aak Maachaar gidduutti uumame egeree Sudaan Kibbaa yaaddoo hamaa keessa buusuunsaas eerameera.
Waltajjicharraa akka hubatametti sochii gamtaan kun hanga ammaatti taasiseen injifannoowwan guguddoon galmaa’anis shororkeessitoota dhabamsiisuufi jeequmsa Sudaan Kibbaa furuurratti hanqinaaleen turaniiru.
Dhimmoota akka hanqinaatti ka’an kanneenirratti xiyyeeffannoon hojjechuu baannaan karoora bara 2020 ardittiitti sagalee meeshaa waraanaa dhabamsiisuuf yaadame milkeessuuun rakkisaadha.
Walumaagalatti, garee shororkeessaa Al-Shabaab injifachuun Somaaliyaa mootummaa ofii qabdu akkuma uumamte, Afrikaa Kaabaattis olaantummaa Bookoo Haaraam gamtaadhaan hanga tokko hunkuteessuun danda’ameera.
Torban kana/This_Week 25321
Torban darbe/This_Month 66536
Guyyaa mara/All_Days 619805